Bubble Trouble APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » ပူဖောင်း Trouble
ပူဖောင်း Trouble APK ကို
ဒုက္ခအဘို့ပြင်ဆင်ပါ! shoot နဲ့ pop အပေါငျးတို့သဘောလုံးနှင့်သင်အချိန်ထဲက run အရင်ကဲ့သို့အစာရှောင်သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုရှင်းလင်း! ဂိမ်းရိုက်ကူးသည့်စူပါပျော်စရာပူဖောင်း Trouble Install, စိန်ခေါ်မှုများရိုက်ပုတ်အချို့သောမြန်ဆန်အရောင်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်နည်းဗျူဟာကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသခြင်းနှင့်အဆင့်ဆင့်အနိုင်ရ။
ပူဖောင်းလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်စူပါစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စစ်မှန်သော adrenaline အလုအယက်ပါ!
ယင်းပူဖောင်းကမ္ဘာတစ်ဦးစွန့်စားမှုပေါ်သွားပြီးတိုင်းပေါ့ပ်မှာအံ့သြဖွယ်ပဟေဠိနှင့်စိန်ခေါ်မှုများရှာဖွေတွေ့ရှိ! ယနေ့အကောင်းဆုံးပူဖောင်းသေနတ်သမားဂိမ်း Play နဲ့ဖြစ်လို့ဦးနှောက်ကြော်ငြာဗီဒီယိုတွင်တစ်ကြိမ်နှင့်အတူထုပ်ပိုးစိန်ခေါ်မှုအဆင့်ဆင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မွေ့လျော်။ သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်အတားအဆီးကိုကျော်လွှား။
သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်3ကိုက်ညီဖို့ဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်တူညီသောအရောင်ပို3ပူဖောင်း pop ဖို့သင်မူကား၎င်းတို့သည်အနီရောင်လိုင်းရောက်ရှိဖို့အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ထိုပူဖောင်းများကိုရှင်းလင်းဖို့သေချာပါစေရန်ရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်အခြားသူကကျော်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်အချိန်ကိုထုတ်ပြေးမတိုင်မီအစာရှောင်ခြင်းပြုမူခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်ရောက်ရန်ရှိသည်!
အရေးယူသို့ get နှင့်ပူဖောင်းပစ်ခတ်မှု extravaganza join longer- မဆိုစောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့!
* တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ယူရန်သင့်လက်ချောင်းကိုလွှတ်ပေးရန်, ရည်ရွယ်ရန်သင့်လက်ချောင်းကိုဆွဲယူပါ။
* ပွဲစဉ်အရောင်များ pop ရန်နှင့်ပေါက်ကွဲမှုသှ။
* Clear ကိုဘုတ်အဖွဲ့ကနေအပေါငျးတို့သရောင်စုံဘောလုံး။
* ထအလျင်အမြန်နဲ့အဖြစ်လျင်မြန်စွာသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်အားလုံးပူဖောင်း pop ။
* စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခမဲ့ပဟေဠိအဆင့်ဆင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Explore ။
* လဲလှယ်ရေးရုံယင်း၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲရန်သင့်ပူဖောင်းပေါ်အသာပုတ်ပါ, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲသှ။
* အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရောက်ရှိသည်အဆင့်တွင်ကြယ်သုံးပွ get ကြိုးစားပါ။
* သင်အဘယ်သူမျှမ wifi ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်လိုအပ် like- ချင်ပါတယ်အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုဒီပျော်စရာပူဖောင်း shooters ဂိမ်း Play ။
ရည်ရွယ်ထားနှင့်ပစ်မှတ်ထိမှန်ခြင်း, ပူဖောင်းများဗုံးအပေါင်းတို့နှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုများရိုက်တယ်။ မိတ်ဆွေများကိုဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ကိုရောက်ရှိသည်အဆင့်တွင်ကြယ်သုံးပွရနိုင်သူကိုကြည့်ပါ။ ဤသည်အေးမြပူဖောင်းပစ်ခတ်မှုဂိမ်းကစားပျော်မွေ့ဖို့မိသားစုတစ်စုလုံးအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောပါ!
လူအပေါင်းတို့သည်ပူဖောင်းတပ်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုဂိမ်းပျော်မွေ့။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအဆင့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပူဖောင်း layout ကိုအညီနည်းဗျူဟာဖွဲ့စည်းရန်အရေးကြီးပါတယ်။ အတားအဆီးကိုကျော်လွှားအပေါင်းတို့နှင့်အတူဘောလုံး pop နှင့်ဗုံးရန်သင့်ယုတ္တိဗေဒနှင့်အရောင်-ကိုက်ညီခြင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ။ ဒီဖြစ်လို့ဂိမ်း ပို. ပင်စိန်ခေါ်မှုရရှိသွားတဲ့အဖြစ်ပျော်စရာပဟေဠိအဆင့်ဆင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တလျှောက်တိုး။ သင်သည်သူတို့န့်အသတ်ဖြစ်သကဲ့သို့, ဘဝတွေကိုအဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်ကျော်မဆိုအဆင့်ကိုစတင်မရပါ!
ဒီလွယ်ကူပြီးစိတ်ပြေလျော့အခမဲ့ပစ်ခတ်မှု app ထဲတွင်ရှိသမျှသောဘောလုံး shoot နဲ့ crack ။
အခမဲ့နှင့် WIN BIG ယခု Play!
ပူဖောင်းသေနတ်သမား™အားလုံးအခွင့်အရေးများ Ilyon Dynamics ကို, Ltd. ကပိုင်ဆိုင်ကြသည်
10.62 ကို MB
ပူဖောင်း Ilyon အားဖြင့်သေနတ်သမားဂိမ်းများ